• भारत भनेर चिनिने उसको एउटा प्रतीक चिह्न छ। अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ। चारमुखे सिंह छ। त्यसको मुनि ‘सत्यमेव जयते’ लेखेको हुन्छ। यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ तर विश्वासचाहिँ म गर्छु। म भारतलाई सोध्नेवाला छु-सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? (संसद, २०७७ जेठ ६)
पछिल्लो अभिव्यक्तिमा त उनले नेपाल तथा भारतका ठूलो संख्याका नेपालीहरुको आस्था जोडिएको विषयमा बोलेका थिए। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सार्वजनिक धारणा भएका कारण यो विषय नेपाल सरकारकै धारणाको रुपमा व्याख्या हुनु स्वाभाविक थियो।विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै हुनुपर्छ, उनको अभिव्यक्तिमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्‍यो। मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उसले भनेको छ- प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक र कसैको भावनामा ठेस पुर्‍याउन होइन।’
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले भारतसँगको सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि खलल पार्न सक्ने परराष्ट्र मामलाका जानकार डा उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। नेपाल र भारतको राज्य-राज्य स्तरमा समस्या आउँदा पनि नेपालको पक्षमा बोलिदिने समुदायलाई पनि पर पुर्‍याउने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको उनको भनाइ छ। राज्य तहमा सम्बन्ध बिग्रिएका बेला जनस्तरको सम्बन्ध भएकै कारण समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने- ‘भोलि केही गरी राज्य-राज्यबीच सम्बन्ध बिग्रियो भने हामीलाई साथ दिने मान्छे कम हुनसक्छन्।’
‘एकातिर संविधान निर्माण, चुनावमा दुई पार्टीको सहकार्य र पार्टी एकीकरणदेखि यता ओलीका निम्ति चीनको भूमिका सहयोगी रह्यो। अर्कोतिर, बलमिच्याइँ र हस्तक्षेपका कारण नेपालमा भारतको विरोध जुनसुकै बेला पनि बिक्ने विषय हो। ओलीले पनि महेन्द्रदेखिको भारतविरोधी राष्ट्रवादको झन्डा उचालेर जीत हासिल गर्दै आएका छन्। देङ र सि जिनपिङकै विचार राजनीतिमात्रै हैन, विकासको न्यारेटिभ बोकेर ठूल्ठूला संरचना निर्माण गर्ने खालको हवाई कुरा गरे। जसले गर्दा राष्ट्रवादी नेताको रुपमा ओलीको उदय सम्भव भयो’, लेखक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्।
भारतसँगका समस्या समाधानका रचनात्मक उपाय पत्ता लगाउन नसक्ने बरु आफूलाई कट्टर भारत विरोधी देखाएर जनमत बटुल्ने पुरानै तरिका उनले अहिले पनि अपनाइरहेका छन्। भारतसँग संवाद गर्नेभन्दा गाली गर्ने नेताको लोकप्रियता उँचो रहने यथार्थ ओलीलाई थाहा नहुने कुरै छैन। अहिले पनि सडकमा ओलीको पक्षमा नारा जुलुस सुरु भएका छन्। यो नाराजुलुस विगतकै अभ्यासको पुनःप्रयोग हो।
‘आन्तरिक संकट गहिरिएको बेला धूर्त नेताहरुले राष्ट्रवादलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्छन्। परिवारदेखि पार्टीसम्म समाजदेखि राज्य र देशमा संकट आउँदा भित्र वा बाहिरका काल्पनिक शत्रुतिर ध्यान मोडिन्छ’, महर्जन भन्छन्, ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने महेन्द्र र वीरेन्द्रले भारतविरोधी राष्ट्रवादकै नारामा आन्तरिक संकटको नक्कली समाधान गरेरै जनतालाई झुक्याए। उनीहरुको ‘राष्ट्र’ भनेकै हिन्दू धर्म र संस्कृति मान्नेहरु, पहाडीहरु, खस नेपाली भाषा बोल्नेहरु, वीर नेपाली इतिहासको गुनगान गाउनेहरु मात्र थिए। त्यसभन्दा परका नेपालीलाई परायाकरण गर्ने वा विदेशी वा शत्रु देख्ने काम जारी छ, ओलीमार्फत् पनि।’
‘उहाँले विकासका नाममा जे-जे गर्छु भन्नुभएको थियो, ती कुनैले पनि काम गरेनन्। सुशासनका कुरा हराए। भ्रष्टाचारका विषयमा उहाँ बोल्नुभयो भने जनता हाँस्छन्। अहिले जनतालाई दिने कुरा केही छैनन्, उहाँसँग। यस्तो भइरहँदा प्रजातान्त्रिक तरिकाले सत्तामा बसिरहन सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई लागेको छ’, प्याकुरेल भन्छन्, ‘भारतलाई उत्तेजित बनाएपछि उसले ‘रिएक्ट’ गर्छ। त्यसको आधारमा पुनः मेरो राष्ट्रवाद फैलिन्छ कि भन्ने उहाँलाई लागेको छ।’
‘उहाँ सचेत ढंगले त्यस्तो कुरा उठाइरहनुभएको छ’, स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव भन्छन्, ‘एउटै कारणले उहाँमा त्यस्तो कुरा आउँछ। उहाँलाई एउटा भूत सवार छ। मलाई हटाउँछन् कि भन्ने डर छ। उहाँलाई सायद लागेको छ- मैले नै यो देश बनाउने हो। नेपालमा अरु कोही छैन।’
विकासमा उनको तरिका चीनको जस्तो भएको लेखक महर्जन बताउँछन्। ‘ओलीले पनि चीनकै तरिका अपनाउन खोजे। लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा बन्देज लगाउँदै चीनमा जस्तो ठूल्ठूला संरचना बनाउने उनको चाहना देखिन्छ’, उनको भनाई छ।
विकासमा चीनबाट प्रभावित भएजस्तो देखिने ओली राष्ट्रवादको प्रयोगमा भने मोदीसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। त्यसका लागि उनले नेपालभित्रकै निश्चित समुदायप्रति आक्षेप लगाउने र भारतलाई शत्रु करार गर्ने तरिका अपनाइरहेको देखिन्छ। एउटै भाषा, एउटै भेषलाई केन्द्रमा राखेर महेन्द्रले ‘सफल’ प्रयोग गरेको राष्ट्रवादी मोडल उनले पनि दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो देखिन्छ।
केपी ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा धार्मिक विषय र प्रतीक प्रयोग गर्नुचाहिँ ‘लाल सलाम’बाट ‘जय श्रीराम’ सम्मको आध्यात्मिक यात्राको परिणाम भएको महर्जनको तर्क छ। ‘एक ऐतिहासिक भौतिकवादी वा द्वन्द्ववादी वा मार्क्सवादी मात्र भएर नपुगेर लेनिनवाद र माओवादी वा नक्सलवादी बनेका नेता कसरी हिन्दू राष्ट्रवादी बन्न सक्छन्, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ओली। मनमस्तिष्कभित्र लुकेर बसेको ब्राम्हणवादले ऐनमौकामामा टाउको उठाएको छ र उनीहरु कुनै पनि रुपरंगमा मार्क्सवादीको रुपमा नफेरिएको तथ्य देखिएको छ’, उनको भनाई छ।
त्यसो त, नेपालमा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टमा खासै फरक पाइँदैन। केही नेताहरुले शास्त्रार्थमा फरक दिलाउने प्रयत्न गरे पनि पार्टीहरुबीच अन्तर पाइँदैन, सरकारका कार्यक्रमहरुमा खासै फरक पाइँदैन। प्याकुरेलको भनाईमा प्रधानमन्त्री लगायत कम्युनिस्ट भनिएका नेताहरुको आइडियोलोजी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)को भन्दा फरक छैन।-नेपाल लाइफबाट